“Araarichi Araara haqaa miti. Jaarsolii jedhanii adeemaa jiran dubbisuun hindandaa’amu waraanan ajjabamanii waan deemaniif” jaal Marroo – Oromedia
Home » Odeeffannoo » Oduu » Xiinxala » “Araarichi Araara haqaa miti. Jaarsolii jedhanii adeemaa jiran dubbisuun hindandaa’amu waraanan ajjabamanii waan deemaniif” jaal Marroo
February 21, 2019 @oromedia 0 Odeeffannoo, Oduu, Xiinxala,
Previous: Baandiraa Habashaa, Toophiyaa fi Garbummaa Uummata Oromoo
Next: “Haqa qabna; qabsoo keenya…uummata keenya defend godhuun mirga keenya.” J Goollicha Dheengee, Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa